Tomaty voatoto - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Hatramin'ny nahitako azy tsotra, haingana ary madio manao ahoana ny fanaovana voatabia nendasina tamin'ny Thermomix® mbola tsy nendasako tao anaty lapoaly intsony. Ka hadinoko daholo ny splashes eraky ny vera ary mila mamadika azy aho mba hahitana tsy fitoviana ary tsy hirehitra.
Ity fomba fahandro ity dia fototra tsara indrindra omanina hatrizay. Betsaka ny azo atao ary congelar amin'ny ampahany. Noho izany, azontsika atao ny mampiasa azy io any aoriana any amin'ny fomba fahandro izay mitaky voatabia voatoto, nefa tsy mila mandahatra ny fotoana fanendasana, manangona minitra vitsy ho fanomanana.
Tiako koa ny manomana voatabia nendasina toy izao voajanahary tokoa matoa izy ireo mampiditra loko sy preservatives artifisialy ho an'ireo novidina. Ity fomba ity no ahalalako ny zavatra hohaniko sy omeko ny fianakaviako.
Ao an-trano dia ampiasaintsika betsaka hiarahana aminy vary, paty, hena, trondro ary legioma. Ho fanampin'izany dia mety ho tsy mahazaka gluten, atody ary lactose.
1 Tomaty voatoto
Fomba fahandro mahazatra izay tsy tokony hanjavona ao an-dakozia.
Voatabia torotoro 1000 g (voajanahary na am-bifotsy)
Menaka oliva 60 g
Siramamy 2 sotrokely
Masira 1 sotrokely
Ampio ny ambiny amin'ireo akora, rakofana ary apetraho eo amin'ny sarony ny sobika manohana ny tongotra 4 hanamorana ny etona ary hisorohana ny famaohana. Izahay dia manao fandaharana 35 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Amin'ny faran'ny fotoana dia vonona ny hampiasa, hitahiry na hangatsiaka izy.
Fanazavana fanampiny - Vary fotsy amin'ny varoma / Pasta fandrahoan-tsakafo
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Resipeo ho an'ny ankizy, Saosy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Saosy » Tomaty voatoto
Angamba fanontaniana adaladala be ilay izy ... fa hoy aho, mandeha aho! haha Afaka mampiasa voatabia voajanahary ianao ary manorotoro azy ao anaty thermomix, sa tsy izany ??? Ny rafozam-baviko dia manana zaridaina legioma ary manao voatabia nendasina, saingy misy voany sy masomboly ary tsy tianay izany. Miaraka amin'izany dia mitovy amin'ilay novidina izy io?
valmite dia hoy izy:
Eny, tamin'ny andro hafa dia nataoko voatabia voatabia avy tao amin'ireo lapa izy ireo ary tena nahay aho.
Torotoro bebe kokoa miaraka amin'ilay fizotrany.
Andramo dia ho hitanao
Mamaly an'i valmita
Jessi, azonao esorina ilay izy ary toa ilay novidinao io. Andramo ary lazao anay.
Tena tsara, manome toky anao aho fa ao an-trano dia tsy voatabia voaendy indostrialy isika, indrindra satria tsy tiako ny preservatives na fandokoana ……. Tena mahasalama sy voajanahary ity fomba fahandro ity, andramo fa tsy hividy voatabia nendasina intsony ianao. fiarahabana
Tsy mbola nataoko indray satria manana ny thermomix aho, madio be io ary mivoaka manankarena ihany
Mahafinaritra !! Nanao an'io aho tato ho ato ary mahafinaritra ahy izany, indrindra satria fantatrao fa voajanahary 100% io, saingy tena marina! Tiako koa ny manampy tongolo, tongolo lay ary ravina basilela hanomezana azy italiana bebe kokoa.
Misaotra ny soso-kevitra Irene, andramako izany.
Mivoaka tsara ve ilay voatabia nendasina? tsy mivoaka be rano? Ampy ve ny fotoana apetrakao? Misaotra anao
Mivoaka nendasina tsara izy ary raha tianao dia afaka manampy minitra vitsy hafa ary matevina kokoa tsy misy olana.
HEVITRA TSARA INDRINDRA, MANASA TANJAKA NY RAY SADY ATAO AMIN'NY TOMPO HATRANY NY TRANO, HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH, IZAO RAHA MITSANGATRA AZY AMIN'NY FARITRA MASINA ARY ATAORAO AMIN'NY BATHROOM MARIA AZA AZONTSIKA MITANDRINA AZY IZAO REHETRA , MARINA?
Eny tokoa ary ho tsara izy ireo !!!
Tsy ampangotrahiko ireo kapoaka hitehirizana azy ireo. Raha vantany vao vonona ny saosy voatabia dia arotsako ao anaty siny fitaratra ary akatoniko tsara, mampiasa lamba satria mafana be izy ireo. Avy eo avadiko mivadika izy ireo ary manadino azy ireo. Ny ampitso na 2 andro dia efa manavotra azy ireo aho. Azoko antoka ianao fa voaisy tombo-kase amin'ny hermetika izy ireo, miaraka amin'ny POF !! rehefa manokatra. Mila mampiasa fitaovana mihitsy aza aho hanokafana azy ireo na ny fanampian'ny vadiko na ny zanako lahy izay mahery noho izaho. Mazava ho azy, maka sambo mihidy tsara. Manantena aho fa hanampy anao izany, satria mifarana eo noho eo io ary tsy ilaina ny mandany ny asa na ny hafanan'ny fampangotrahana azy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra Begoña, amin'ny soso-kevitrao, hataonay izany. Mirary ny soa indrindra
Salama! Mety misy olona mandefa ahy ve ny recette momba ny laoka?
MITADIAVANA MASINA TANANA FAHAROA, VOAFITRAKA NY TAPAKA ARY IZAO TSY MAHAY Mividy Vaovao INDRINDRA RAHA MISY MAHAY IZAO, MBA AOKA IZAO FA MISAOTRA EKONOMIANA
Valiny amin'i CHARO
olaa miraa volana vitsivitsy lasa izay hitako tamin'ny pejy internet k nivarotra thermomix d tanana faharoa aho izay tsy haiko intsony raha hananako dia ilay pejy http://www.segundamano.com ary 400 € ny vidiny ary ny maodely 31 Manantena aho fa misy ilaina izany.
Efa nanao ny voatabia aho fa nandoro ahy. Ny thermomix-ko no iray alohan'ity, ho an'ity ve? Misaotra anao
Salama, manao ahoana ianao? Raha milaza ianao fa voatabia am-bifotsy, dia ilay amidiny amina voajanahary voatoto am-bifotsy ary miaraka amin'ny maodely thermomix 21 dia mitovy ihany ary raha ampiana tongolo isika dia tsy maintsy endasina aloha na miaraka daholo misaotra …… ……………….
Eny, io voatabia io no tiako holazaina ary raha manampy tongolo ianao dia sosy kely aloha.
Raha ny fahitako azy dia fomba fahandro tena tsotra sy matsiro.
Andramo fa matsiro ny voatabia !!!
Manararaotra sy mahandro atody ao amin'ny varoma aho raha endasina kosa ny voatabia. Na manasa azy ireo ianao na mamono azy ireo amin'ny sarimihetsika mifikitra. Rehefa lasa sahabo ho 20 minitra dia esorinao izy ireo ary apetraho ambony ambany ilay sobika mba tsy ho triatra.
Miaraka aminao aho, ny voatabia nendasina dia fomba fahandro mety hanararaotana ny varoma indray !!!
Leo aho isaky ny fahavaratra tamin'ny fanaovana voatabia am-bifotsy, miaraka amin'ny hafanana sempotra sy ny fotoana efa lany ... ary tampoka dia napetrakao tamiko ity recette ity..Vonjy aho! Tamin'ny andro hafa dia nanao siny roa aho izao vonona ny hanao bebe kokoa ... misaotra betsaka ... Te hanontany anao aho raha manana fomba fahandro mahafinaritra toy izany ka mila manamboatra mofomamy ho an'ny zanako fa omaly dia nanao fitsangatsangana izahay ary naka vitsivitsy, Te-atambatra amin'ny crème aho, na amin'ny lovia mofomamy spaonjy na torohevitra omenao ahy ... misaotra betsaka ary arahaba
Paula, faly aho fa tsara ho anao ny fomba fahandro voatabia. Amin'ny maha mofomamy misy blackberry ahy dia hataoko talanjona ilay mofomamy ary haingoiko miaraka amin'ireo blackberry eo amboniny.
Raha mampiasa voatabia voajanahary aho, apetrako amin'ny hoditra sy masomboly ve izy ireo?
Azonao atao izany, saingy marina fa afaka mahita nugget ianao any aoriana ary tsy fantatro raha tianao izany.
Somary manjono aho amin'ny thermomix na dia ampiasaiko matetika aza. Ny tsy ampiasaiko dia ny kojakoja, tiako mba hanazavanao amiko izay hapetraka ilay sobika satria tsy azoko. misaotra miarahaba
Elena, rehefa mila fomba fahandro ianao hanaparitaka ny ranona ananany ary hivoaka matevina kokoa dia esorinay ilay bikabita. Fa raha zavatra miparitaka toy ny voatabia na jamam-pitiavana dia apetrantsika eo ambonin'ilay sarony ny sobika rehefa esorintsika ny vera ary noho izany dia mijanona eo ireo famafazana ireo ary tsy mandoto ny lakozia manontolo.
Nataoko tao anaty thermomix fotsiny dia tsara dia tsara. Nasiako dipoavatra mena sy dipoavatra maitso ary oregano kely. Ny zavatra ratsy dia ny mofo izay nohaninao nefa mando hehehehehehe.
Heveriko fa, zavatra tena tsara tsy tantinao ny mandroboka ny mofonao. Faly aho fa tianao ilay izy.
Tiako ilay izy, matsiro ny tsiro, tsy misy afa-tsy kely ny mivoaka ny voatabia iray kilao, nataoko ary avy eo nasiako vary ka voatery nasiako rano kely ary nihena kely ny tsiro, tiako ho fantatra inona no azoko atao mba Aza avela hitranga amiko indray izany, tena tianay ny vary misy voatabia, nefa tsy matevina loatra. Miarahaba anao ary misaotra an'ireo resipeo.
Manandraha voatabia 300 gr kokoa, satria raha mametraka bebe kokoa isika dia mety hivoaka. Hitanao manandrana.
Tokony ho matsiro izy io, saingy azo atao ve io tomatasy nendasina io ary afangaro? Misaotra !!!!
Salama Mari Carmen, ao an-tranoko misy zaridaina legioma sy voatabia voatabia isika, ny reniko dia manomana ny sasany amin'izy ireo ao anaty banga ary ampahany iray hafa izay ataony amin'ny voatabia nendasina ary natsiany ary tena tsara ...
Voatabia nendasina matsiro. Namboarinay tamina voatabia voatoto am-bifotsy avy any Mercadona. Fanontaniana vitsivitsy:
1st Raha mampiasa voatabia voajanahary izy ireo dia azo apetraka tsy misy peeling.
Faha-2 Misy fika hanadiovana tsara ny vera. Niorina kely tany ambany izy ary nanana asa be tamin'ny spaonjy izahay hanalana ny tasy.
ny zavatra ao anaty sobika dia ny etona fa tsy etona
Valiny tamin'i Jose Sanchez
Salama Rolgue, mahafinaritra! Ity ny rohy ho anao hanomanana ny vary fotsy sy atody voadio: http://www.thermorecetas.com/2010/03/26/receta-thermomix-arroz-con-pisto-y-huevos-poche/
Nataoko tamina zaridaina ny voatabia ary tonga fotsy be dia be izy ary tena be ranoka rehefa nendasina, tsy haiko raha sokafako fa tsara aho
Mamaly ny lanezy
Salama N steal, arakaraka ny marika voatabia voatoto ampiasainao, mety misy ranoka mihoatra na latsaka. Izany no antony anolorako hevitra fa raha hitanao fa be loatra ny ranonao dia avereno famerenana mandritra ny 5-10 minitra.
MARIA DE LA O AGUILAR dia hoy izy:
TIAKO NY OLON-DOA MBA HANAMPY AZY NY PUMPKIN CAKE SY PUDDING PUMPKIN, Misaotra
Valio amin'i MARIA DE LA O AGUILAR
Salama Maria, ireto misy fomba fahandro voatavo sasany izay heveriko fa tianao:
JACHA dia hoy izy:
Te-hanamboatra voatabia nendasina miaraka amin'ny voatabia voalohany tao an-jaridainako aho ary tiako ho fantatra ny ora sy ny hafaingam-pandeha tokony hikirako, dia hanaraka ny fomba fahitan'i Silvia aho. Manana ny maodely Thermomix farany aho. MISAOTRA
Valiny amin'i JARCHA
Maninona ianao no tsy manandrana manao ny saosy aloha ary ny manosotra farany? Ka ho hitanao raha mila mangovitra ianao na tsia. Na izany na tsy izany dia miankina kely amin'ny habetsaky ny voatabia hataonao izany fa 30 segondra kosa no hazahiko, hafainganana 5.
Avelako any Silvia ny fomba fahandro marobe raha sanatria afaka manome aingam-panahy anao izy ireo:
Saosy voatabia matevina
Saosy voatabia fomba italiana (suco de pomodoro)
Francis Raises dia hoy izy:
Nametraka azy 30 minitra aho fa tsy 35 ary nirehitra. Tsy marina io fomba fahandro io.
Valiny tamin'i Francisco Alza
Salama Francisco, hafahafa ihany, efa an-taonany maro no nanamboaranay an'io fomba fahandro io tamin'ny vokatra lehibe. Nametraka voatabia voatoto 1 kg ve ianao? Indraindray raha mampihena ny habetsahana isika dia tsy maintsy mampihena ny fotoana ihany koa. Misaotra nanoratra taminay!
Zucchini sy jamam-paoma